Ọdịiche dị n'etiti PMSM Motors na BLDC Motors
Ọdịiche dị n'etiti PMSM Motors na BLDC Motors Na -ekwu maka ọdịiche dị n'etiti igwe PMSM na moto BLDC, n'eziokwu, n'ihe gbasara ngwa moto ọgbara ọhụrụ, ihe dị iche n'etiti ha abụọ abụghị nnukwu, enwere ike dochie ha abụọ. Ka m buru ụzọ kwuo maka mbido ya: P ...
Ajụjụ moto, kedu nke na -esiri gị ike?
site na nchịkwa na 21-06-12
Ajụjụ moto, kedu nke na -esiri gị ike? 1. Gịnị mere moto ahụ ji ewepụta mkpị ọkụ ugbu a? Ihe dị ugbu a na bldc moto shaft na-ebu oche-ntọala sekit ka a na-akpọ ogwe osisi. Ihe na -ebute oghere dị ugbu a: (1) Ogwe ndọta na -enweghị ntụpọ; (2) E nwere harmonics na ike ọkọnọ ugbu a; (3) Ogbenye m ...
Nnyocha na ọgwụgwọ nke ọdịda BLDC moto na -amalite ọdịda
Nyocha na ọgwụgwọ BLDC Motor Start Failure 1. Volta dị oke ala iji malite moto BLDC. Mgbe moto bldc enweghị ike ịmalite mgbe ejikọrọ ọkụ eletrik atọ, ihe nwere ike ime bụ: (1) Usoro njikọ njikọ nke moto bldc kwesịrị ịbụ delta (△) connectio ...
Ihe na -ebute nsogbu nsogbu ịkwọ ụgbọ ala BLDC na ụzọ nrụzi
Ihe na -akpata Nsogbu Mgbapụ moto na BLDC Mgbe oghere dị n'etiti mgbanaka dị n'ime nke iburu ya na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ mgbanaka mpụga na mkpuchi ngwụcha karịrị 0.1mm, stator na rotor nwere ike na -ete (zaa). Mgbe oghere ahụ dị ọkụ, BLDC Motor ka nwere ike bido ma gbaa ọsọ, b ...
Sayensị moto 丨 Ịghọta BLDC Algorithms Control Motor
Sayensị moto 丨 Ịghọta Algorithms Njikwa Mgbọ ala BLDC: Ndị na-eri ihe chọrọ ngwa ụlọ ha, ngwaọrụ ugbo na ngwaahịa ndị a na-anyagharị ka ha nwee ike karịa, pere mpe ma nwekwuo arụmọrụ. Dị ka ọtụtụ ngwaahịa elektrọnikị nke ndị ahịa, ndị na -azụ ahịa na -atụkwa anya na ihe ndị a ...
Ụzọ dị mfe ma dịkwa ọsọ iji kpee ikpe ma moto BLDC ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ
site na nchịkwa na 21-05-04
Ụzọ dị mfe ma dịkwa ọsọ iji kpee ikpe ma BLDC moto ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ A. Jiri tebụl na-ama jijiji mkpuchi mkpuchi ahụ na-atụle nguzogide mkpuchi n'etiti winding nwere akụkụ atọ (voltapụtara 380V) yana mgbochi mkpuchi ala ( na chassis). The mkpuchi res ...
Ọdịiche dị n'etiti ọnụ ahịa ikike ike ike mgbe emechara New China National Standard for Motors mgbe June 1st 2021 gasịrị.
site na nchịkwa na 21-05-01
Ọdịiche dị n'etiti ọnụ ahịa ikike ike ike mgbe emechara New China National Standard for Motors mgbe June 1, 2021 mbipụta kachasị ọhụrụ nke ọkọlọtọ mba China chọrọ GB 18613-2020 “Ụkpụrụ dị oke ọnụ na ọkwa arụmọrụ ike nke Motors eletriki ...
BLDC Onye njikwa moto maka mgbatị ike, Onye njikwa BLDC maka mgbatị ike, BLDC Onye njikwa moto maka ihe nhicha ntutu, FOC BLDC Onye njikwa moto maka mgbatị ike, FOC BLDC Onye njikwa moto maka nhicha ihe nhicha, Onye njikwa FOC BLDC maka ike ọkụ, ase maka pricelist